कोरियामा नेपालीको जनजीवन : सहर सुनसान, कोठामै बित्छ दिन ! – Korea Pati
March 18, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on कोरियामा नेपालीको जनजीवन : सहर सुनसान, कोठामै बित्छ दिन !
अमिर योन्जन /सउल , दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण भएको डेढ महिना बढी भएको छ । यो अवधिमा ८४ जनाको मृत्यु र ८ हजार ४ सय १३ जनामा संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ ।कोरियाको चौथो ठुलो सहर थेगुबाट फैलिएको भाइरस उत्तर ग्याङ्साङ र सउल क्षेत्रमा पनि भेटिए । यो साता विगत तीन साता अघिको भन्दा नयाँ संक्रमणको संख्या
निकै कम देखिएका छन् । सोमबार तीन सातायताकै कम एक सय भन्दा कम संक्रमित तथ्य बाहिर आएको छ । कोरिया सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल एण्ड प्रिवेशन (केसीडीसी) का अनुसार ८ सयभन्दा बढी मानिस उपचार गरी घर फर्केको जनाएको छ ।सरकारले थेगु लगायतका सहरहरुमा बाहिर निस्किन प्रतिबन्ध लगाएको धेरै भएको छ ।
थेगुमै पार्वती वाइबाको काम गर्ने कम्पनी छ । अघिल्लो हप्ता उनकै कम्पनीको छेउमै रहेका कम्पनीका कामदारलाई कोरोना लागेको पुष्टि भएको वाइबाले जानकारी दिइन् । ‘छिमेकी कम्पनीको मानिसलाई कोरोना लागेको भन्ने थाहा भएपछि हामी पनि डराएका छौं’, उनले भनिन्, ‘नजिकै भाइरस संक्रमित देखिएपछि हामीलाई पनि लाग्ने हो कि भन्ने डर लागेको छ । सावधानी दैनिक रुपमा अपनाइरहेका छौं । बजार नगाएको पनि हप्तौं भएको छ ।’थेगुमा झन्डै २५ लाख मानिस बसोबास गर्छन् । थेगु र आसपासका क्षेत्रमा ७ हजार नेपाली ईपीएसमार्फत् आएर काम गरिरहेका छन्  । अहिलेसम्म नेपालीहरुलाई कोरोना लागेको पुष्टि भएको छैन । विगतको तुलनामा बजारहरुमा मानिसहरुको चहलपहल निकै कम छ । थेगु सहर त, झन सुनसान नै छ ।
सरकारले गतहप्तादेखि सबै क्षेत्रमा माक्स नयाँ नियमबाट किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येकले आफ्नो जन्ममितिको अन्तिम अंकलाई हेरेर जोरविजोर प्रणाली वितरण गरिरहेको छ । बजारमा माक्सको हाहाकार भएपछि सरकारले नयाँ नियम ल्याएको हो । यसअघि माक्स किन्न मानिसहरु घण्टौ लाइन बस्न परेको थियो ।चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस विश्वभर तीब्र रुपमा फैलिएपछि कोरियन सरकारले १ सय ५० भन्दा बढी देशहरुबाट कोरिया प्रवेशलाई रोकेको छ । बिहीबार (मार्च १९) देखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विशेष परिक्षण गर्ने भएको छ । विदेशबाट आएका मानिसहरुलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए विशेष जाँच गरी स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको निगरानीमा उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने नदेखिएकाहरुलाई समेत १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र घर जान दिने जनाइएको छ ।सैलुङ अनलाईनबाट
भोलिदेखि हुने भनिएको एसईई परीक्षा स्थगित
October 3, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने